कुराकानी: गुगलको नयाँ सन्देश अनुप्रयोग ग्याजेट समाचार
गुगलले सन्देश अनुप्रयोगहरूको साथ धेरै भाग्य पाएको छैन। Google Allo यसको एक राम्रो उदाहरण हो, किनकि यसले एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूलाई कहिल्यै विश्वास गर्दैन। तर कम्पनी अब एक नयाँ अनुप्रयोग संगै आउँदछ जुन व्हाट्सएप, आईमेसेज वा टेलिग्राम जस्ता सेवाहरूको वास्तविक विकल्प हुने प्रतिज्ञा गर्दछ। Sयो च्याटको बारेमा हो, नयाँ मेसेजिंग अनुप्रयोग.
कम्पनी सफलता को लागी धेरै आश्वस्त देखिन्छ कि च्याट चल्दै छ। किनकि गुगल अल्लोको विकास पूर्ण रूपमा बन्द छ। त्यसोभए उनीहरूले आफ्ना प्रयासहरू मुख्यतया यस अनुप्रयोगमा केन्द्रित गरिरहेका छन्। क्लासिक पाठ सन्देशहरूमा समान तरीकाले कार्य गर्ने अनुप्रयोग।
यो एक अनुप्रयोग हो जुन एसएमएसको विस्तार वा विकासको रूपमा देखिन्छ। वास्तवमा, एन्ड्रोइड सन्देशहरु पूर्वनिर्धारित अनुप्रयोग हुनेछ जुन होस्ट च्याटको सेवा दिनेछ। यस भित्र, विभिन्न मेसेजिंग सेवाहरूको श्रृंखला समूहबद्ध गरिनेछ।
विशेष: च्याट एन्ड्रोइडको मेसेजिंग गडबडको लागि गुगलको अर्को ठूलो फिक्स होhttps://t.co/G4fqNAQVkY pic.twitter.com/RdVuaxI1Vf
- विर्ज (@ सर्भर) अप्रिल 20, 2018
प्रयोगकर्ताहरूले फाईलहरू (फोटोहरू, भिडियोहरू, GIFs, emojis ...) साटासाट गर्न सक्षम हुनेछन् र त्यहाँ समूह च्याट, टाइप संकेतक, सन्देश वितरण सूचनाहरू र गुगल सहायक हुनेछ। अरु के छ त, च्याटको एक डेस्कटप संस्करण अपेक्षित छ। त्यसैले तिनीहरू पनि यस सम्बन्धमा व्हाट्सएपसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन्।
यो RCS प्रोटोकलमा आधारित हुनेछ जुन डाटा नेटवर्कले शोषण गर्दछ, त्यसैले यसले कार्य गर्नको लागि इन्टरनेट जडान प्रयोग गर्दछ। यदि प्रयोगकर्ताले आरसीएस सन्देश पठाउँदछ जोसँग कुराकानी समर्थन छैन, यसले सन्देशलाई सामान्य एसएमएसमा रूपान्तरण गर्दछ। IMessage जस्तो एक प्रकार्य आज छ.
कुराकानीले धेरै आश्वासन दिन्छ किनकि हामी देख्न सक्छौं कि यसले एकल अनुप्रयोगमा विभिन्न सेवाहरू एकीकृत गर्दछ। त्यसो भए Google लाई चाहिने यो अन्तिम मेसेजिंग अनुप्रयोग हुन सक्छ। यस समयमा हामीलाई यो थाहा छैन कि यो कहिले एन्ड्रोइडमा पुग्नेछ। तर हामी यो डेटा छिट्टै जान्ने आशा गर्दछौं। यस नयाँ अनुप्रयोगको बारेमा तपाई के सोच्नुहुन्छ? के यो व्हाट्सएप डिट्रोनिंगमा सफल हुनेछ?
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » च्याट: गुगलको वाट्सएपमा नयाँ विकल्प